Ikike: Ihe Na-adịghị Mma nke Usoro Ọdịnaya Kachasị | Martech Zone
Enweghị izu na-aga n'ihu Martech Zone na anyị anaghị edozi ma na-ekerịta eziokwu ndị ọzọ, echiche, nhota, na ọbụnadị ọdịnaya ha site na akwụkwọ ozi na akwụkwọ ndị ọzọ.
Anyị abụghị ebe a na-eche maka ọdịnaya ndị ọzọ, n'agbanyeghị. Kekọrịta echiche ndị ọzọ anaghị eme ka ị bụrụ onye nwe ikike, ọ na-ahụta ma na-ewusi ikike onye edemede ahụ ike. Mana… ime nkwalite, ịza ajụjụ, ịkatọ, inye nkọwa na ịkọwapụta ọdịnaya ndị ọzọ nke ọma ọ bụghị naanị na ị mata ma na-ewusi ikike ha ike… ọ na-emekwa ka nke gị ka mma.
Mgbe m chọtara ọdịnaya dị na ntanetị nke bara uru nye ndị na-ege anyị ntị, ana m ewepụta oge iji nlezianya nyochaa ya wee nye nkọwa m maara na ndị na-ege m ntị ga-enwe obi ụtọ. Dịka ọmụmaatụ, ezughị ezu iji bipụta infographic nke onye ọzọ mepụtara. Achọrọ m ịkekọrịta na infographic ahụ ma nye nyocha nke ọma banyere ya nke pụrụ iche na ọnọdụ my ọkachamara
Nkọwa: Thedị obi ike nke onye maara ọtụtụ ihe gbasara ihe ma ọ bụ onye ndị ọzọ na-akwanyere ùgwù ma ọ bụ na-erube isi.
Na nkọwa ahụ, enwere ihe atọ achọrọ maka ikike:
Ịmara - onye maara ọtụtụ ihe ma na-ekpughe ha ihe omuma.
obi ike - onye kwere na ha ihe omuma mgbe ha kesara ya.
Ịghọta - ndị ọkachamara ndị ọzọ na-achọpụta nka mmadụ ji obi ike gosipụta.
Ntughari echiche ndi ozo nke ndi ozo agaghi eme gi ikike. Ezie na ọ nwere ike na-egosi na i nwere ụfọdụ nka, ọ na-adịghị enye ọ bụla nghọta n'ime obi ike gị. Ọ gaghịkwa eme ka ndị ọgbọ gị mara gị.
Ikike dị oke mkpa maka njem ndị ahịa n'ihi na ndị na-azụ ahịa na azụmaahịa na-achọ nka iji nyere ha aka wee gwa ha mkpebi mkpebi ha. N’ikwu ya n’ụzọ dị mfe, ọ bụrụ na ị na-ehota onye ọzọ, onye na-azụ ahịa ga-elele isi mmalite ahụ dị ka ikike a ma ama - ọ bụghị gị.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ka a mata gị dị ka ikike, bụrụ ọchịchị. Gaghị eme nke ahụ site na ịkwado echiche ndị ọzọ. Gosiputa echiche gi puru iche. Nwalee ma kwado echiche gị na nyocha na akwụkwọ. Wee kesaa echiche ndị ahụ gafee saịtị ụlọ ọrụ na-enye gị ohere isonye. Onye nkwusa obula na acho uzo puru iche - obu uzo di nfe.
Nsonaazụ nke ikwupụta nka gị bụ na ị na ndị ọgbọ gị na ụlọ ọrụ gị ugbu a, na-elegharaghị gị anya ka ị kwụ n'azụ ha. Ka ị na-ewulite nkwanye ugwu ma jiri obi ike kesaa ọrụ gị, ị ga-ahụ na a ga-atụkwasị gị obi ma mesoo gị n'ụzọ dị iche. Ndị ọgbọ gị ga-amata gị ma kee ihe ị na-enye ha.
Ma mgbe a hụrụ gị dị ka ikike, na-emetụta mkpebi ịzụta ihe ga-adị mfe karị.
Tags: ikikeobi ikenjem ndị ahịaNkọwa nke ikikeọkachamarandị ọgbọmmata